Dil Caawa magaalada Muqdisho loogu geestay ganacsade la dhashay xildhibaan ka tirsan baarlamanka Hirshabelle | Dayniile.com
Home Warkii Dil Caawa magaalada Muqdisho loogu geestay ganacsade la dhashay xildhibaan ka tirsan...
Dil Caawa magaalada Muqdisho loogu geestay ganacsade la dhashay xildhibaan ka tirsan baarlamanka Hirshabelle
Wararka ka imaanaya caawa magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii Kooxo bastoolado ku hubeysan ay maqribkii ku dileen Ganacsade agagaarka Garaashka Macallin Nuur oo ku yaalla degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in Ganacsadahan lagu magacaabi jiray Cali Cabduqaadir Muudey, waxaana la sheegay in uu isla goobta ku geeriyooday Marxuumka.
Wararka ayaa sheegaya in Marxuumka uu la dhashay xildhibaan ka tirsan baarlamanka Hirshabelle oo la yiraahdo Xassan Cabduqaadir Muudey, lamana oga sababta loo dilay
Sidoo kale dilka kadib ayaa Ciidamada amniga ay daba galeen ragga dilka geystay oo galay Guri ku yaalla xaafadda Macmacaanka oo markii dambe la hareereeyey, waxaana halkaasi ka dhacay is-rasaaseyn dhexmartay dableyda guriga gabaadka ka dhiganetsay iyo ciidamada aamaanka, iyadoo ciidamo badan halkaasi la geeyay. Si loo qabto kooxda Hubeysan
Previous articleDiyaaradaha dagaalka Yahuuda oo weerar xagga hawada ah ku qaaday dhismooyin dalka Syria ee Dimishiq.
Next articleWaa kee dalka Maraykanka la saaxiibka ah ee laga baqayo in Ruushku weeraro?
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta daahfuray ‘kulan wadareedka dardar galinta hiigsiga xukuumadiisa’ oo lagu dardar galinayo shaqooyinka wasaaradaha...
Orodyahan caan ah oo ku dhawaaqay in uu ku biirayo jiidda...